Ka soo kabsado feylasha la tirtiray si fudud Photorec oo ka soo baxa qunsulka | Laga soo bilaabo Linux
Ka soo kabsado faylasha la tirtiray si fudud Photorec kombiyuutarka
Leo | | Aplicaciones, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Maalmihii dambe saaxiibkeedu wuxuu la yimid dhibaato aad u daran.Waxay ku qaabeeyeen MicroSD taleefankeeda gacanta sawiradeedana way dhinteen !!
Markii aan waxyar oo cilmi-baaris ah sameynayay waxaan ka helay codsi aad u fiican qunsulka. Dhab ahaantii waxaa jira laba: Tijaabadada y sawir qaade.
Tijaabadada Waxaa loo isticmaalaa inuu ka soo kabsado files tirtiray laakiin gaar ahaan qoruhu lumay. Halkii sawir qaade wuxuu ku takhasusay soo kabashada faylasha la tirtiray (gaar ahaan faylasha faylasha badan) oo waxyaabo kale ayuu sameeyaa.
Marka ugu horeysa qodob muhiim ah: Haddii aan ognahay inaan wax si khaldan u tirtirnay ama u qaabeynay, sabab la'aan aan wax ku dul qorno. Haddii ay tahay qayb ka mid ah kombuyuutarkayaga, waxaa ugu wanaagsan in laga furo. Haddayna ku jirto qaybta nidaamkayaga, waxaa ugu wanaagsan in isla markiiba la damiyo kombuyuutarradeena oo tallaabada laga qaado LiveCD.
Iyo hal shay oo kale, si aad u soo ceshato feyl la tirtiray waa inaad la kulanto shuruudo gaar ah, mararka qaarkoodna ma ahan wax aad u fudud, waana wax aad u yar (sababo farsamo awgood) inay wax walba ka soo kabato.
Intaas markaan dhahno aan bilowno:
Waxyaabaha ugu horreeya marka hore, si loo rakibo:
sudo apt-get install testdisk (xirmadan ku xir labada barnaamijba).
In kasta oo labada barnaamijba ay leeyihiin koronto awood leh oo kaladuwan, haddana waxaan uga tagayaa qoraal kale. Hadda waxaan diirada saari doonaa soo kabashada xogta leh sawir qaade.
Waxaan fureynaa boosteejada
Waxaan doorannaa galka (haddii uusan jirin waxaan abuurnaa) si aan u kaydinno faylasha la soo helay.
sudo photorec (waxaan ubaahanahay mudnaanta superuser)
Ogaanshaha xoogaa Ingiriis ah waxaan ogaanay inay na siineyso kala dooran inta u dhexeysa saxannada aan galnay. Tan iyo markii aan heli kari waayey xiisaha aan haysto, waxa kaliya ee aan haysto ayaa ah darawalkayga aan aadka u jeclahay.
> [Soco] Si aad u doorato (taasi waa, riix [Gali])
Sida aad ku arki doonto kiiskan, waxay na siinaysaa inaan dooranno qaybta.
Markaas waa inaan dooranaa > [Raadi] oo wuxuu ina siinayaa inaan doorto nooca qaybta. Ma ahan wax aad u adag, waxaan heysanaa labo ikhtiyaar oo keliya. Si loo fududeeyo, haddii ay tahay disk ama qayb ka mid ah Linux waa kan ugu horreeya, haddii ay la socoto nidaam kale oo qalliin ama ay tahay pendrive, kaarka xusuusta ama wax kale, waa tan labaad (marka laga reebo waxyaabo aad u qariib ah oo laga reebo).
Waan sii soconaa. Hadda waxaan haysannaa laba ikhtiyaar:
FreeKaliya wuxuu soo ceshaa kaliya faylasha la tirtiray ee ku yaal meel bannaan.
dhan: Wuxuu soo celiyaa wax walba, ha la tirtiro iyo haddii kaleba.
Waxaan dooranay uun Bilaash. Daaqada xigta waxay ku tuseysaa liistada faylalka la mari karo oo aan ku nuqulan karno faylasha ay ka soo kabaneyso (macquul ahaan kuma jiri karto isla qalab). Waxaan dooran karnaa galka sida aan ujecelnahay, laakiin haddii tallaabada ugu horreysa aan abuureyno tusaha oo aan ku dooranno cd Halkaas ayey ku soo ceshan doontaa, maxaa yeelay marka la fiiriyo waxay ku sameysaa galka aan ka shaqeyneynay terminal-ka. Hadday taasi sax tahay, waxaan ku riixnaa kumbuyuutarka C waxayna bilaabi doontaa inay keydiso wixii ay hesho. Waxaa intaa dheer, inta lagu jiro hawlgalka waxay muujin doontaa liis ay ku jiraan tirada feylasha kala duwan ee la helay.
Markii aan dhammeyno waxaan fureynaa fayl-baareha aan ugu jecelahay oo waxaan tagnaa galka aan ku soo ceshanno faylasha si aan u aragno waxa aan ka helno.
Barnaamijkan aad ayuu ii anfacay, waxaanan rajaynayaa inuu kuugu adeegi doono inta aniga ila eg. Waxaanan idin xasuusinayaa inayna macquul ahayn in wax walba la soo celiyo.
KELIYA WAQTI !!! Haddii aan kaliya tirtiro faylka 100 kb. Miyay tahay inaan nuqulo 500 Gb oo ah meel bannaan oo bilaash ah qaybtayda illaa galkayga si aan u helo feylkaas ???
Su'aal aad u wanaagsan, runtuna waxay tahay ma dooneyno inaan ka dhigno albumku mid ku shaqeeya farxad.
Aynu si dhakhso ah u aragno (waxay aad ugu egtahay tan kore) sida looga soo kabsado hal (ama faylal badan) Tijaabadada.
1) Waxaan fureynaa qunsulka
3) cd ./la helay /
5) Waxaan dooranay ikhtiyaarka Abuur (wuxuu abuuri doonaa liiska faylasha)
6) Waxaan dooraneynaa diskiga, pendrive ama cutubka uu yahay.
7) Nooca kala sooc (haddii aadan aqoon midka had iyo jeer) waa midka aad adigu ku doorato adigu.)
8) MUHIIM: waxaan doorannaa Sare, doorashada labaad. Inta soo hartay waxaan kugula talinayaa inaad uga tagto isticmaaleyaasha horumarsan.
9) Waxaan dooraneynaa (haddii ay khuseyso) qeybta meesha feylku ku yaalay. Ogsoonow in shaashadda hoose aan ku haysanno 5 xulashooyin: Nooca, Kabaha, Iska daa, Abuurista Sawirka, Jooji. Waxa ina daneynaya ayaa ah Iska daa. Iyada oo fallaadhaha bidix / midig ee kumbuyuutarka aan dooranay iyo (ka dib markii aan dooranay qaybta) waxaan siineynaa Ku qor.
10) Hadda waxaan aragnaa liistada faylka la baari karo. Faylasha gaduudan waa kuwa la tirtiray lana soo celin karo. Waxaan raadineynaa kuweena iyo (sida ku xusan amarrada dhamaadka daaqadda) Waxaan riixnaa C (waa muhiim in laga dhigo wax yar) si loola shaqeeyo kaliya faylkaas. Haddii ay jiraan dhowr, waxaan ku xulaneynaa iyaga : ka dibna waanu cadaadinaa C (u fiirso farqiga u dhexeeya kiiska sare iyo kan hoose).
11) Hadda waxaan dooranay galka halka aan ku keydinayno. Haddii aan raacno tillaabooyinka sidii kuwii hore ee mkdir iyo cd, si toos ah ayaan u riixi karnaa C y DIYAAR!!!
Aan tagno oo aan aragno sida feylka uu yahay.
Hal shay oo kale, maadaama aan la shaqeyneyno sudo feylku hadda waa xidid. Laakiin sida xaqiiqada ah waxay horeyba u ogaan doonaan waxa ay ka yeelayaan kiiskan 🙂
Hadda wax walba waan idhi. Ku raaxayso oo waxaa laga yaabaa inay wax kuu tarto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ka soo kabsado faylasha la tirtiray si fudud Photorec kombiyuutarka
62 faallooyin, ka tag taada
TestDisk iyo Photorec, aad ayey faa'iido u leeyihiin, laakiin waa inaad si taxaddar leh ula dhaqantaa.
Barnaamijyo waaweyn oo kaa badbaadin kara wax ka badan hal dhibaato 🙂
Sidoo kale way fiicantahay inaad dhigto xiriiriyaha rasmiga ah ee barnaamijka:
Sideedaba, barnaamij aad ufiican, waxaan dhowr jeer u isticmaalay inaan inaadeerkay dhibaatada ka saaro, kan diskiga qaabeeyey ee sawiradii waayey, hehe!
xiiso leh, inkasta oo photorec ay u adeegto oo keliya inay ka soo kabato faylal fara badan
inuu ka soo kabto fayl kasta oo nooc kasta ah oo la tirtiray qayb ka mid ah waxaan u isticmaali karnaa 'extundelete'
run maahan: oo leh photorec, in kasta oo magaceeda uu marin habaabin karo, waad soo kaban kartaa dhammaan noocyada feylasha
Jawaab Jordi Fdez
PhotoRec waa software kabashada xogta faylka loogu talagalay inuu ka soo ceshado sawirada lumay xusuusta kamarada dhijitaalka ah ama xitaa Hard Disk-yada. Waa la kordhiyay si loo raadiyo sidoo kale madax aan maqal / muuqaal ahayn. Waxay raadisaa faylasha soo socda waxayna awood u leedahay inay tirtirto:
* Xogta maqalka Sun / NEXT (.au)
* RIFF maqal / muuqaal (.avi / .wav)
* BMP wax yar (.bmp)
* bzip2 xoqitaan xog ah (.bz2)
* Koodhka isha ee ku qoran C (.c)
* Sawirka Canon Raw (.crw)
* Buugga 'Canon' (.ctg)
* Subdirectory sub
* Dukumentiga Microsoft Office (.doc)
* Bogga HTML (.html)
* Sawirka JPEG (.jpg)
* Fiidiyowga MOV (.mov)
* MP3 audio (MPEG ADTS, lakabka III, v1) (.mp3)
* Guuritaanka Khabiirada Sawirka Kooxda video (.mpg)
* Sawirka Minolta Raw (.mrw)
* Sawirka Olympus Raw Format (.orf)
* Qaabka Dukumentiga La qaadan Karo (.pdf)
* Qoraalka Perl (.pl)
* Sawirada Shabakada La qaadan karo (.png)
* Raw Raw Fujifilm sawir (.raf)
* Sawirka Contax (.raw)
* Sawirka Rollei (.rdc)
* Qaabka Qoraalka hodanka ah (.rtf)
* Qoraalka Shell (.sh)
* Diiwaanka Tar ((tar)
* Tag Foomka Faylka Sawirka (.tiff)
* Sigma / Foveon X3 sawir ceeriin (.x3f)
* Diiwaanka zip (.zip)
Dhab ahaan Xitaa waxay ka soo ceshanaysaa faylasha leh "qalaad" kordhin.
Farqiga ugu weyn (I didria to the gross) wuxuu noqonayaa in Photorec uu soo kabo feylasha "dhan", Testdiskna waad ku dooran kartaa.
Waad ku mahadsan tihiin dhammaantiin inaad faallo bixiseen, waxay iga dhigeysaa inaan arko in shaqadaydu aysan micno lahayn vain
Waxaan hayaa meel disk ah oo meel ku keydinaysa marka aan si kadis ah macluumaad badan u tirtiro runtiina ma aanan aqoon sida loo soo celiyo.
Miyay noqon kartaa haddii aan isku dayo inaan isticmaalo barnaamijka waqtiga dambe ay caawin doonto?
Aragti ahaan haa 🙂
Macno malahan inta ay le'egtahay inta aad tirtirtay macluumaadka, illaa inta aadan nuqul ka samayn wax cusub oo HDD ah, waa inaad awood u yeelatid inaad soo ceshato xogta.
Waxaan ku isticmaalay 500gb HDD kaas oo qaybtii ext4 si khalad ah loogu tirtiray ... Waan ku faraxsanahay inaan soo ceshay wax walba (waxay qaadatay saacadihiisii) ...
Waad salaaman tahay waxaan ku jiraa xaalad xoogaa adag, oo ka timid buugga loo yaqaan 'ultrabook', waxaan si kadis ah u tirtiray qaar ka mid ah sawirrada aan kuwaa ahayn. Markii aan rabay in aan ka soo dejisto tijaabada 'ubuntu usb', waxay ii sheegaysaa in aysan heli karin xirmada la codsaday, waxaan horey u waydiiyay saaxiib haddii ay jirto wado kale oo lagu rakibo laakiin wuxuu ii sheegay in cd-ga iyo USB-ga kaliya ay keenaan xirmooyinka lagama maarmaanka ah. si loo tijaabiyo ubuntu.
Su'aalahaygu waxay yihiin Miyaan rakibi karaa tijaabada 'diskka' oo ah meeshii aan ku tirtiray feylasha? Hadday saas tahay, ma awoodaa inaan ka soo kabto sawiradaas (qiyaastii waa 30) boqolkiiba boqol? Waa in la ogaadaa maaddaama ay tahay buugga 'ultrabook', ma laha cd drive mana furi karo si aan uga saaro qafiska adag.
Waxaan rajeynayaa jawaab deg deg ah, inay iga saari doonto dhibaatada.
Ku jawaab Juanacatlan
Xaqiiqdii, haddii aad LiveCD ka maamusho xusuusta Flash haddii aad rakibi karto xirmooyinka aad rabto ... xitaa ka dhig mid joogto ah, taas oo ah, inaad dib u bilowdo oo aad dib ula soo gasho xusuusta USB-ga oo aan waxba kaa lumin ..
Waa run. Haddii aad u adeegsato Furo-furista si aad u abuurto USB-ga la kici karo wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka ah inaad boos ku sii haysato si aad uga dhigto mid joogto ah.
Waxaan la yaabanahay in aanan heli karin baakadka Ma cusbooneysiisay bakhaarada ka hor intaadan isku deyin inaad soo dejiso? Ma haysataa dhammaan meelaha lagu kaydiyo shaqeysiiyay?
Haddii kale, waxaa jira dhowr disho "samatabbixin" oo horeyba u keenay qalab noocan oo kale ah si loogu isticmaalo qaab toos ah.
sahaminta c4 dijo
Aad u faa'iido badan. Waxaan soo helay dhowr faylal ah. Mahadsanid.
Ku jawaab c4explosive
Kuwa u baahan inay gacanta ku hayaan aaladda 'Live distro', xiriirka soo socda ee Wiki-ka ayaa ah khalkhalka ku keenaya asal ahaan.
Waxaan soo ceshtay feylal badan oo ku haray galka, laakiin waa feylal la yaab leh, midkoodna kumajiro macluumaadka aad raadineyso, waa nambarro nadiif ah iyo sawiro dhif ah .. ayudaaaaaa
Fariin heer sare ah, wax badan ayey i caawisay, uma maleynaynin inay sidaas ufudud tahay 🙂 waxaana ku adeegsadaa shaqadeyda hoosteeda win2 hoosteeda, salaan.
Ku jawaab yoipokme
Aad u fiican maqaalka iyo sidoo kale faallooyinka dhammaystiraya. Labadaan jeerba waan istcimaalay dhowr jeer, laakiin marwalba waxaan kusoo noqdaa boggan si aan xusuusteyda ugula wareego. Tirtiraha-0.2.4-1 ma uusan ogeyn, laakiin horey ayaa loogu rakibay si loo tijaabiyo, haddii 44,0 KiB ay tahay, waxay awood u leedahay inay sameyso waxa ay ku leedahay waan iska siibay koofiyadeyda.
Xitaa markay dhacdo in fayl lumiyo, haddii tani ay tahay qiimaha ku-ahaanshaha hoggaamiyaha nidaamka, aniga shaqsiyan waxaan ku bixiyaa farxad, wax badan oo ka wanaagsan xididka shirkadda heeganka ku jirta, in kastoo mararka qaarkood ay farahoodu ka dheereeyaan maskaxda .
Mahadsanid Leo iyo xubnaha la shaqeeya.
Ku jawaab Ictineu
Waad ku mahadsan tahay faallooyinkaaga. Runtu waxay tahay in barnaamijyadan marwalba gacanta lagu haayo, maxaa yeelay qofku weligiis ma ogaan karo goor ay dhacdo lama filaan ah dhacdo.
miguel feres dijo
Galab wanagsan walaalo, waxaan kaa rabaa macluumaad si aan u arko waxa aan ku sameyn karo kiiskeyga kahor inta aanan isku deyin in aan rakibo barnaamijyadaas aad kugula talineyso soo kabashada xogta ... Waxaan hayaa troja kombiyuutar (64-bit UTECH) oo waxaan rakibay ubuntu 12.04 ilaa Waan soo dejisan karay OS rosafresh 2013 (waan la ildaran yahay waxa ay dhahaan »versionitis iyo distriris»,) in kastoo aanan waxba ka aqoon cilmiga kombuyuutarka laakiin casharrada laga helo shabaqa, taasi way fududahay… Waan soo dejiyey ayaa leh Os, waa intaas !!! laakiin markaan ka raadiyo »downloads» waxaan gartay inay ku jirto galka feylka ee oranaya »TEMP», waan furaa, waxaana jira xoogaa feylal qoraal ah iyo galka la yiraahdo »rosafresh.iso..cd ceyriin I. Waxaan u guuriyaa si aan ugu rido »downloads» oo kaliya waxaan nuqul ka sameeyaa qoraalada oo ma ahan CD-ga, waxaan dib ugu noqonayaa »TEMP», iyo layaabka ??? ma aanan helin meelna, hada su’aasha milyan ee dollar: waxay u maleynayaan inaad soo kaban karto, mise waxaan lumiyay 1,5gb OS ah oo aan soo dejiyay OS ??? waxaan sugayaa talo soo jeedintaada, waxaan idhi nabad galyo ,,,,,
Ku jawaab miguel ferres
Wax uun baa igu dhacay mana garanayo sida loo qaato
-run jdfrag qaybtayda ntfs -waxaan haystaa 3 qaybood oo aan tirin isweydaarsiga: ext4 -linux mint-, ntfs -windows xp -, ntfs -backup-
chkdisk waxaa lagu ordi jiray keydka - halka ay ka jajabtay- wax walbana waan ka soocay halkaas: Waxaan haystaa qayb nadiif ah oo ah 560 gb; Waxaan ka furay qaybtayda 'ntfs' qaybta 'Linux' waxaanan isku dayayaa inaan ku dhejiyo amarka DD kumbuyuutar kumbuyuutar ah 1tb USB ah: Shakigaygu waa:
1) dd hal baayte byte? -Tani waxay la socotaa astaamaha baloogyada wax ka yar 1 mega-aan dhahno 254k- si aan u awood u yeesho in aan isku xiro qaybta aan u leeyahay darawalka USB-ka oo aan halkaa ka sameeyo keyd?
2) Waxaan u baahanahay inaan ku soo cesho macluumaadka liistada ku qoran - waa waxtar in la soo kabsado mp3s, laakiin waxaan hayaa waxyaabo badan oo loo qaybiyay fayl sababo kala duwan awgood
Ku jawaab neox32000
Miyaad isku dayday inaad si toos ah ugu socodsiiso sawir-qaadista qaybta aad jeexjeexday? (sida iska cad iyada oo aan kor loo qaadin). Waxaan u maleynayaa inaysan muhiim ahayn in qeybta loo jajabiyay disk banaanka ah, laakiin diskigaani wuxuu faa iido weyn u leeyahay in la diro waxkasta oo barnaamijku soo kabanayo (waxaan kuu rajeynayaa nasiib inaad badato), gaar ahaan waxaad ka faa'iideysan doontaa xawaare. Xusuusnow in aysan suurtagal ahayn in laga soo kabto 100% faylasha, gaar ahaan qaybta ntfs oo inta badan aad u kala daadsan.
Waad salaaman tahay Leo, waan ka xumahay dhibaatada, laakiin sida super-newbie-ka ah Linux-ka waxaan had iyo jeer dhibsadaa dad badan ... Hoos waxaan uga tagay faallo ku saabsan welwelka aan qabo, haddii aad i caawin kartid, waxaan noqon lahaa mahadsanid walaal ...
maaddaama photorec ay soo ceshatay faylal magac kale oo asal ah iyo magacaba aad muhiim u ahaa, waxay duullaanka u qaadeen shirkad takhasus gaar ah leh, laakiin ma aysan soo ceshan karin wax xog ah, waxay ku andacoonayaan in diskiga uu madhan yahay, sidee taasi u dhici kartaa? malahayga photorec ayaa tirtiray diiwaanka kadib markii lasoo kabsaday.
qofna si isku mid ah ma u dhacday?
Jawaab Jorge Flores
Photorec waxba ma tirtirto, shirkadaadu been ayey kuu sheegtay. Si aad ugu soo ceshato feylasha leh magaca asalka ah waxaa jira TestDisk, in kasta oo waqtiyadii aan adeegsaday aysan aniga waxba ii tarin. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa barnaamijka Windows-ka ee la yiraahdo Recuva, waa midka leh natiijooyinka ugu fiican ee aan soo arkay, laakiin sidoo kale ma aha mid la qaldi karo
Waxaan shaki weyn ka qabaa inay ka jawaabaan faalladan. Waxaan u maleynayaa inay tahay bot ama wax, ama cinwaanka emaylka ee aad gasho ma jiro. Xitaa Akismet wuu tirtiray / qufulay.
Hahaha, sidaas ayaan moodayay markii aan arkay inuu wax ku qoro Ingiriis laakiin magaciisu yahay Jorge Flores oo isagu IP-ga waxa uu ka haystaa Mexico. 😀
In kasta oo intaanan jawaabin aan ka raadiyey faalladaada Google oo aan wax natiijo ahi ka soo bixin; markay yihiin bots isla faallooyinka ayaa ka muuqda bogag badan. Oo kuma ay darin wax xiriiriyeyaal ah, sidaas darteed haddii ay tahay bot waa mid aad u dhif ah. : S
Marka labada. Xitaa waan aaminay. Runta ayaa ah inay layaabtay inuu kahadlo arintaas si iskumar ah inkasta oo uu yahay robot.
Isku day inaad ku jawaabto Ingiriis:
Anigu Ingiriis badan ma aqaano, laakiin sidaas uma maleynayo. Waxaan haystay markii ay ahayd inaan ka soo kabto feylal sawirro ah waxaanan sameeyay laba jeer oo labada jeerba waxaan soo helay isla faylashaas. Haddii disk-ka adag uu waxyeello soo gaadhay, waxaa laga yaabaa inuu gebi ahaanba burburay si uu dadaal ugu sameeyo inuu u akhriyo dhammaan disk-ka soo-celinta dhammaan xogta.
Wuxuu ka yimid Mexico, waxaad kula hadli kartaa Isbaanish. 😛
Si aad u soo ceshato sawirro tirtiray, kee baa ugu fiican?
Waxaan doonayay inaan rakibo Photorec anigoo adeegsanaya Synaptic oo ku yaal Debian Wheezy oo waxaan ka helay 2 faylal TeskDisck, waan rakibay, anigoo rajeynaya inay tahay arjiga oo leh qaab muuqaal ah, laakiin, meelna kuma arko, xitaa ka dib markaan dib u bilaabo dhabta dhabta Maxay noqon laheyd wadada loo maro kiiskan?
Aad baad ugu mahadsantahay qofkasta oo I hanuunin kara ...
Salaan! Nasiib darrose mar dambe ma isticmaalo Debian (waxaan u wareegay OpenSuse), sidaa darteed wax badan kaa caawin maayo, waan ogahay inay jiraan dhowr codsi oo garaaf ah laakiin way xaddidan yihiin, laakiin weligey midna ma rakibo mana aanan raadinin. Haddii aad ubaahantahay wax wax ku ool ah waxaan kugula talinayaa inaad ku qabato konsole. Weli wax baad ka raadin kartaa internetka.
Aad baad u mahadsan tahay, aad u faa'iido badan, toos u daabacaadda iyo galka baangadaha.
Waad ogtahay inaan Kali ku rakibay kumbuyuutarkayga isla markaana aan si kadis ah u lumiyay faylal qaar, sideen ku soo ceshan karaa?
Ku jawaab kalimba
isha Waxaan ahay qof ku cusub tan compus-ka, haddii qof i caawin karo
haye su'aal, miyaa wax iska caadi ah in markii aad ku dhameysato soo kabashada barnaamijkan, natiijaduna ay tahay feylasha qaar aanan koobi karin ama u dhaqaaqi karin meel kale? kaliya waxay ku sii nagaanayaan galka soo kabashada, iyo astaamaha faylasha waxay leeyihiin quful. Sideen ku hagaajin karaa taas? iga caawi fadlan, waana ku mahadsan tahay, qoraalkaagu aad ayuu u wanaagsan yahay,
Haa, waa wax caadi ah maxaa yeelay waxaad u shaqeysay barnaamijka asal ahaan, iyo inaad isticmaale ahaan caadi ah awood uma yeelan doontid inaad wax ka beddesho ama aad wax ku sameyso.
Xalka: u maamulo maareeyaha faylka xididka saldhiga, tusaale:
Tag galka oo beddel rukhsadaha si dhammaan isticmaaleyaashu ay wax uga beddeli karaan feylasha.
Way fududahay. Salaan.
Su'aal ma i tusayso qaybta Linux, waxaan joogaa Ubuntu 10.4.
Aqoonsi la'aan dijo
Waad ku mahadsantahay qoraalkan. Waxaan isticmaalayaa Linux Mint markii ugu horaysay waxaanan iskudayay inaan sameeyo toobiye, waxaan moodayay inaan sameeyay oo aan tirtiray galka, waxayna ii soo baxday inaanan samayn toobiye ee aan dhaqaajiyay, markaa waan tirtiray asalka galka! Markiiba waan ogaaday isla markaana waxay ii dhowdahay wax uun, si dhakhso leh ayaan u qoslay oo waxaan imid halkan.
Waxaan ku guuriyey dhammaan amarradaas qunsulka (markii ugu horreysay ee aan isticmaalo qunsuliyadda) haddana waa ay soo kabanaysaa! Waxay sheegaysaa inay horay u haysatay 3000 txt, 1900 pdf, 1200 doc, 1300 jpg, iwm.
Marka way fiican tahay. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin, waana ku mahadsantihiin inaad soo dhigteen sharraxaad, sawirro iyo amarro, oo aydaan sameynin casharro fiidiyoow ah oo dhib ku ah daawashada.
Ku jawaab Anonimisita
Aad ayaan ugu faraxsanahay inay kuu adeegayso. Waxaan arkaa inaad ku cusubtahay Linux, waxaan kuu rajeynayaa nasiib wacan.
Reer Yerbas dijo
Hagaag markaan aqriyay casharka iyo faallooyinka oo dhan, hadiiba ay jirto jawaabta aan raadinayay, waxaan weydinayaa su'aasha, maadaama aanan helin jawaabta.
Miyaan si khalad ah u tirtiray fiidiyowyadeyda qaar (gameplays) kumbuyuutarkeyga, qaar ka mid ah fiidiyowyadu waxay hayaan 15 GB, wadar ahaan waxay ahaayeen 150 GB, waxaan ku duubtaa barnaamij la yiraahdo actión, isla barnaamijkaasna waxaan ka tirtirayay fiidiyowyada aanan sameyn Baahida, taas oo ahayd Layaabkeyga markii aan doonayo inaan tirtiro fiidiyowga, dhammaan kuwii la waayey, waxaan u maleynayaa in halkii aan ka riixi lahaa badhanka si aad u tirtirto feylka la xushay, waxaan u siiyay inuu tirtiro dhammaan faylasha,
Waan isticmaalay barnaamijkaan waxaanan ogaaday in fiidiyowyada ay soo ceshanayso aysan qabin wax ka badan 1,86 GB (dhowr fiidyowyo isku cabir ah) iyo 954 Mb sidoo kale dhowr fiidyow, waa wax lala yaabo maxaa yeelay fiidiyowyadu isku miisaan ma lahayn, mid walbana lahaa cabbir ka duwan.
Barnaamijku si uu u soo ceshado dhamaan fiidiyowyada ayaa hada dhamaaday oo waxaa soo baxday in cabirka fiidiyowgu uusan macno lahayn, dhamaan fiidiyowyada la soo kabsaday waxaa la arkaa kaliya 2-da daqiiqo ee ugu horeysa, wax xal ah ama barnaamij kale oo lagu soo kabsado fiidiyowyo waaweyn?
Waxaan haystaa kanaal YouTube ah oo la yiraahdo El yerbas
Ku jawaab El Yerbas
Waad salaaman tihiin, isla waxbaa igu dhacay.
Ma awoodday inaad xalliso dhibaatada? Waa deg deg aniga aniga inaan xaliyo.
Ku jawaab Maria Fernanda
Maria Fernanda Rios dijo
Waad salaaman tahay, markii aan ka soo degsanayay qalabka SD-ga, kumbuyuutarku qalad ayuu sameeyay, markaan eegayna waxba kuma jiraan kaarka, sida iska cad ma uusan dhammaysan gudbinta maaddada waana la tirtiray. Maaddadu waa sawirro iyo fiidiyowyo.
Waxaan soo maray Photorec wayna soo ceshanaysaa sawiradii iyo fiidiyowyadi, faylashii way soo baxayaan, laakiin markaan tago inaan u ciyaaro ma arko sawirka iyo dhawaqa.
Fadlan ma i caawin kartaa
Waxaan ubaahanahay inaan keydiyo sheyga, fadlan !!
Jawaab u dir María Fernanda Ríos
Haddii ay soo ceshato macluumaad laakiin waxaan u maleynayaa inay yihiin faylal saafi ah oo aan waxba haysan, maxaa xiisaynaya inaan ogaado haddii qof iga caawin karo inaan ka soo kabsado faylasha .sql ee kaydka xogta oo si otomaatig ah loo soo saaro crontab fadlan
Wax ku biiris aad u fiican, laakiin markaan soo ceshado feylashayda ma lahan wax kordhin oo waxay leedahay magac guud, ma jirtaa wado lagu aqoonsado mid kasta kordhintiisa?
Ku jawaab Mika
Waan ka shakisanahay. Xusuusnow in softiweer kasta oo soo ceshanaya feylasha ay ku dadaalaan akhrintiisa iyaga oo aan haysan "index", waana sababta inta badan kiisaska magacyada iyo kordhintu u lumaan qaar badana ay u kharribmaan. Dad badan oo maareeyayaasha faylalka ah ayaa aqoonsada feylasha iyadoon loo baahnayn kordhin, xitaa waxay ku tusi karaan horudhaca fiidiyowyada ama sawirada. Miyaad isku dayday inaad faylalka la soo helay kula baarto Dolphin? Way i caawisay.
Mario alanis dijo
hello a Nicmo waxaad yeelan doontaa horyaal barnaamijka hoomboro, mahadsanid !!!
Jawaab Mario Alanis
Haye ,,, sidoo kale hadda waad soo ceshan kartaa feylashaadii la tirtiray sida sawiro, fiidiyow ama faylal muusiko iwm adoo adeegsanaya barnaamijyada kale ee soo kabashada xogta sida barnaamijka kaarka soo kabashada xogta. Software soo kabashada Tani waxay si fudud u soo kaban karto tirtiray fayl nooc kasta oo xusuusta in dhowr tallaabo. Raac xiriirka hoose si aad uga faa'iideysato barnaamijkan:
Waad salaaman tihiin, kahor intaanan daaqadaha rakibin, hada waxaan u wareegay ubuntu mahadnaqa photorec waxaan ku guuleystey inaan badbaadiyo waxyaabo badan, laakiin qofna ma oga hadii furayaasha sirta ah ee aan ku keydiyey google chorme la badbaadin karo?
Isticmaal isla xisaabtii aad lahayd? Waxaan u maleynayaa inay tahay xalka kaliya
SAAXIIB! MA UU U SHAQAYN DOONAA WACDARADOODA ANDROID?; FIKIRKA AYAA SHAQAYN KARA, Marka AYAAN TIXGALIN DOONAA OO WAAN KUU SHEEGI DOONAA NATIIJADA ...
WAXAAN KALOO BARAN DOONAA CODSIYADA QAARAN EE ISBADALKA «LAAS VENTANAS» EE CUATE «BILLY PUERTAS» QAMIIL IYO / AMA PLAYONLINUX WAAN IDIIN DHIHI DOONAA NATIIJADA ...
WAA BILAASH AH "ANDROID" IYO "THE PENGUIN"
Waxaan la socdaa UBUNTU 12 DEL PANGOLÍN IYO 14 DEL CARNERO ...
KHALAD BADBAADISAY A .DOC IN TMP WAANA MA HELI KARO
Aad baad u mahadsan tihiin, barnaamijkani wuxuu soo kabsaday ku dhowaad 20 GB oo sawiro iyo fiidiyowyo ah oo aan moodayay inay lumeen
Ronaldo Rodríguez dijo
Undelete ma soo baxo. Waxaan hayaa Ubuntu 14.04
Jawaab Ronaldo Rodriguez
Haye, anigu waxaan ahay Nico, waa su'aal aan ku soo ceshay tiro fiidiyowyo ah iyo faylal kale, laakiin waxaan aad u xiiseynayay inaan ka soo ceshado qaddar muhiim ah oo aan u lahaa faylasha Midis iyo Kars, taas oo ah, karabooyin, laakiin waxaan ku beddelay magaca Tirooyin taxane ah oo ay aad u adagtahay in la isticmaalo maxaa yeelay marna ma ogaan kartid heesta ay tahay, ma jirtaa suurtagalnimada in dib loogu soo celiyo feylashaas oo wata magacoodii asalka ahaa? mahadsanid
Subax wanaagsan, su'aal ayaan qabaa, maxaa yeelay sawirada laguma soo celin cabirkooda asalka ah laakiin wey yar yihiin markii la weynaadana waxay u muuqdaan kuwo cakiran, fadlan qof ayaa iga caawiya arintaas. Mahadsanid
Markii aan isticmaalayay photorec waxaan u siiyay inay ka raadsato dhamaan diskiga 320 gb, iyo xulashooyinka waxaan siiyay kaliya qaar ka mid ah kuwa aan u baahanahay, sikastaba ha noqotee waxay qaadaneysaa howsha ilaa 200 saac, waa caadi? talo kasta, mahadsanid !!!
Haddii aan ka soo kabsado faylasha, laakiin ay ii keenaan culeys aad u badan, sidee baan u tirtiri karaa?
Ku jawaab mario cabrera
Cumar caloosha dijo
Horaan u aqriyay maqaalka, waxbadan kama aqaan terminal-ka laakiin waxbaan fahmay. Waxaan rajeynayaa in qof ii sharaxo tufaax. Horey aad ayaad umahadsantahay. Masixi mashiinka adag si qalad ah (A) waxaan rabaa in aan ka soo cesho feylasha ku jira darawalka adag (B) maxaa yeelay laptop-keygu ma laha awood badan oo uu ku soo ceshan karo feylasha la tirtiray. Sideen ugu helaa inuu iyaga ugu koobiyo diskiga adag (B). Mahadsanid
Ku jawaab Cumar Barriga
Qoraal yar si loo xaqiijiyo akoonnada gmail